Uzisebenzisa kanjani izikrini ezi-2 kumawindows 10 - Easy Multi Display
Idalwe Qalile 25 / 05 / 2021
2. Ukubeka Imibukiso Yakho
Lo mbhalo uzokuchazela ungazisebenzisa kanjani izikrini ezi-2 kumawindi 10. uma usenezinkinga ngezikrini zakho, isoftware yethu noma ezinye izimpawu zedijithali izihloko zizwe ukhululekile uku Xhumana nathi, sizojabula ukukusiza.
1. izidingo zohlelo
Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi yiziphi izici zesistimu yakho ngoba zizoshintsha ngokuya ngenani lezikrini ofuna ukuzibonisa ngasikhathi sinye. Isikrini esisodwa ngeke sidinge ukumiswa okufanayo nezikrini eziyisithupha. Ngakho-ke uma ufuna ukusebenzisa izikrini ezi-2 ku-windows 10, uzodinga ukuthi ube nalokhu kusetha:
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lokhu kulungiswa kusebenza kusuka kusikrini esisodwa kuya kwesithathu. uma ufuna ukubonisa izikrini ezingaphezu kwezintathu, kuzofanele uthuthukise ukucushwa kwakho.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemfuneko yohlelo ukusebenzisa i-Easy Multi Display, bheka le ndatshana: "Izidingo System".
2. Khetha izikrini zakho
Lapho usukwazi ukuthi ukucushwa kwakho kwanele ukuphatha Ukukhonjiswa Okulula nezikrini zakho ezimbili, lapho-ke kuzofanele ukhethe inketho yesikrini ezimbili ku-Easy Multi Display. Ukuze wenze lokhu, kufanele ukhethe inketho "yokubonisa okungu-2" esikrinini esamukelekile sesoftware.
Ngendlela, ungakhetha enye inombolo yezikrini, kufanele uqinisekise ukuthi ukumiswa kwakho kulungile yini.
Inani lezikrini ku-Easy Multi Display
3. Khetha izindawo zakho
Phambilini, ukhetha inani lezikrini ofuna ukuzisebenzisela ukubonisa ama-medias akho. Manje, udinga ukukhetha izindawo. Ku-Easy Multi Display, ungahlukanisa sonke isikrini kwizindawo ezi-1, 2, 3 noma 4 ukubonisa ama-medias amaningi ngasikhathi sinye. Kukuwe nesidingo sakho, uma uhlangabezana nezidingo zohlelo oluncane ngeke ube nezinkinga.
Inani lezindawo ku-Easy Multi Display
4. Khetha abalingani bakho
Ekugcineni, ukuze ubonise ama-medias, udinga ukukhetha ... ama-medias! Nge-Easy Multi DIsplay ungabonisa izinhlobo eziningi zamafayela njengezithombe (i-JPG, PNG, GIF ...), amavidiyo (MP4, AVI, MOV ...), amafayela e-PowerPoint ne-Google Amaslayidi noma isoftware efana ne-Microsoft Words noma i-Mircrosoft Excel ! Uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana nokuthi ungayibonisa kanjani isoftware, ungabheka le ndatshana "Ungawabonisa kanjani amafayela wakho we-PowerPoint"Noma"Ungawaveza kanjani amafayela wami we-excel"Lezi zihloko ezimbili ziphathelene nesoftware yeMicrosoft kodwa lokhu kusebenza nayo yonke isoftware.
Esibonelweni esingezansi, sikhetha ukuhlukanisa isikrini sokuqala ezindaweni ezingama-4 bese sikhetha ukubonisa amawebhusayithi ama-4 (indawo eyodwa, iwebhusayithi eyodwa). Kuzofanele uphinde lokhu kukhwabanisa kuzo zonke izikrini zakho. Ngemuva kwalokho, uzokwazi ukubonisa! Kulula akunjalo? Uma uthanda isoftware yethu, unga izame mahhala!
Ama-medias ama-Multi Display